Umugqa wokukhiqiza we-plywood wholesale Umkhiqizi nomhlinzeki | Ukuxubana
I-plywood ingenye yezinto ezisetshenziswa kakhulu ifenisha nenye yamapaneli amakhulu asekelwe ngokhuni futhi ingasetshenziselwa izindiza, imikhumbi, izitimela, izimoto, ukwakhiwa nokupakisha njll Ipulangwe lingathuthukisa izinga lokusetshenziswa kwezinkuni. Kuyindlela eyinhloko yokonga izinkuni.
Usayizi ojwayelekile ngu-1220mmx1440mm, futhi ubukhulu obujwayelekile bungu-3mm, 5mm, 9mm, 12mm, 15mm, 18mm njll. Izinkuni eziyinhloko ezisetshenziselwa i-plywood zifana ne-poplar, beech, pine, birch, meranti, eucalyptus, okoume njalonjalo.
I-multilayer plywood ishidi elinezingqimba ezintathu noma elinemigqa eminingi elenziwe ngokhuni lwezinkuni bese lihlanganiswa nezinamathiselo. Imvamisa isebenzisa inani elingalingani lezendlalelo ze-veneers futhi yenza izikhombisi-ndlela ze-fiber zama-veneers eziseduze ziqondane.
Yokwakha yaseGrisi uyaxebuka umugqa, veneer dryer, i-glue mixer, i-glue spreader, umshini wokuvula, umshini obandayo, umshini oshisayo, umphetho wokucheba isaha kanye ne-sanding machine.Inkampani yethu ineminyaka eminingi yesipiliyoni ku-R & D nokukhiqiza, ukunikeza amakhasimende isitimela izixazululo, futhi ngemuva kokuphela kokufakwa ukuhlinzeka amakhasimende ngesiqondisi sobuchwepheshe sokukhiqiza. Insizakalo yethu ngeke imiswe kuze kube yilapho amakhasimende ethola imikhiqizo esezingeni eliphakeme nenelisekile.
Ubuchwepheshe bokwenza amapulangwe buzofundiswa ikhasimende ngemuva kokuthi ikhasimende lithenge ulayini wokukhiqiza, futhi sizozibophezela ekuqalisweni kwecala komugqa womshini kuze kube yilapho amakhasimende ethola imikhiqizo ehlolwe ngekhwalithi.
1.Sine yokuthengisa professional kanye uchwepheshe kanye service amaqembu. Sinikeza izixazululo ze-one -stop kanye nokufakwa kobuchwepheshe nokuthunyelwa.
Ukusetshenziswa kobunhloli njengohlelo lwe-PLC lokulawula ngokuzenzakalela nohlelo lokugijima olungagunyaziwe luthuthukisa ukusebenza kahle kakhulu futhi longa izindleko zabasebenzi nezokukhiqiza.
3.Ama-Siemens motors asetshenziswa kulayini wokukhiqiza ukuqinisekisa ukuthi imishini isebenza kahle kakhulu.
4.Amandla amapuleti ensimbi asetshenziswe kulo mugqa anqunyiwe futhi ashiselwe, ukuze imishini ehlobene igxilile, inembe kakhudlwana.
Langaphambilini i-log debarker
Olandelayo: wokucwebezelisa sanding umshini